26 Kwathi ngonyaka weshumi nanye, ngosuku lokuqala lwenyanga, kwafika izwi likaJehova kimi, lathi: 2 “Ndodana yomuntu, ngenxa yokuthi iThire+ lithé ngeJerusalema,+ ‘Ashila! Laphuliwe,+ izicabha zezizwe!+ Ngokuqinisekile ukuthambekela kuzoba ngakimi. Ngizogcwala—lona libhuqiwe,’+ 3 ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngimelene nawe, Thire, ngizokwenyusa izizwe eziningi zimelane nawe,+ njengalapho nje ulwandle lwenyusa amagagasi alo.+ 4 Ngokuqinisekile ziyozichitha izindonga zaseThire+ zidilize imibhoshongo yalo,+ futhi ngiyophala uthuli lwalo lusuke kulo ngilenze inyabule yedwala elicwebezelayo. 5 Liyoba igceke lokweneka amanetha ahudulwayo+ phakathi kolwandle.’+ “‘Ngoba mina ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘liyoba futhi yinto yokuphangwa izizwe. 6 Imizana engaphansi kwakho engaphandle—iyobulawa ngenkemba, abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova.’+ 7 “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngiletha eThire uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni evela enyakatho,+ inkosi yamakhosi,+ enamahhashi+ nezinqola zempi+ nabamabutho amahhashi nebandla,+ yebo uquqaba lwesizwe. 8 Imizana engaphansi kwakho engaphandle uzoyibulala ngenkemba, enze udonga lokukuvimbezela akwakhele igoqo lokuvimbezela+ akuphakamisele isihlangu esikhulu; 9 futhi igalelo lomshini wakhe wokuhlasela uzoliqondisa ezindongeni zakho, imibhoshongo yakho ayidilize, ngezinkemba zakhe. 10 Ngenxa yesikhukhula samahhashi akhe uthuli lwawo luyokwemboza.+ Izindonga zakho ziyozanyazanyiswa ngumsindo womuntu webutho labamahhashi nesondo nenqola yempi, lapho engena ngamasango akho, njengalapho kungenwa emzini ovulwe ngokubhodlozwa. 11 Uyozinyathela zonke izitaladi zakho ngezinselo zamahhashi akhe.+ Abantu bakho uyobabulala ngenkemba, izinsika zakho zamandla ziyowela emhlabathini. 12 Ngokuqinisekile umnotho+ wakho bayowuphanga bagcugce impahla yakho ethengiswayo,+ badilize izindonga zakho, izindlu zakho ezifiselekayo bazidilize. Amatshe akho nezinto zakho zokhuni nothuli lwakho bayokubeka phakathi kwamanzi.’ 13 “‘Ngiyobangela ukuba iphele inhlokomo yokuhlabelela kwakho,+ nomsindo wamahabhu akho ngeke usazwakala.+ 14 Ngiyokwenza ube yinyabule yedwala elicwebezelayo.+ Uyoba igceke lokweneka amanetha ahudulwayo.+ Ngeke uphinde wakhiwe kabusha; ngoba mina Jehova ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.+ 15 “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo kulo iThire, ‘Lapho kuzwakala umsindo wokuwa kwakho, lapho abanamanxeba abulalayo bebubula, lapho kubulawa ngokuceka phakathi kwakho, ngeke yini iziqhingi zizamazame?+ 16 Ngokuqinisekile zonke izikhulu zolwandle ziyokwehla+ ezihlalweni zazo zobukhosi+ zisuse amajazi azo angenamikhono, futhi ziyozihlubula izingubo zazo ezifekethisiwe. Ziyokwembatha izingubo zokuthuthumela. Ziyohlala phansi emhlabathini,+ ngokuqinisekile zithuthumele umzuzwana ngamunye+ futhi zikugqolozele zimangele. 17 Ziyokuphakamisela ingoma yokulila+ zithi kuwe: “‘“O, yeka indlela oshabalale ngayo, wena owawuhlalwa abavela ezilwandle,+ muzi odunyisiweyo, owaba ngonamandla olwandle,+ wona nalabo abahlala kuwo, abesabisa bonke abakhileyo emhlabeni! 18 Manje iziqhingi ziyothuthumela ngosuku lokuwa kwakho. Iziqhingi ezisolwandle ziyophazamiseka ngenxa yokuphuma kwakho.”’+ 19 “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Lapho ngikwenza umuzi obhuqiwe, njengemizi empeleni engahlalwa muntu, lapho ngiletha phezu kwakho utwa lwamanzi, namanzi amaningi ekwembozile,+ 20 ngiyokwehlisa futhi kanye nalabo abehlela phansi egodini kubantu bakudala,+ futhi ngiyokubangela ukuba uhlale ezweni eliphansi kunawo wonke,+ elinjengezindawo ezabhuqwa kudala, kanye nalabo abehlela phansi egodini,+ ukuze ungahlalwa muntu; ngizobeka umhlobiso ezweni lalabo abaphilayo.+ 21 “‘Ngizokwenza ube yizinto ezesabisa kakhulu ezingazelelwe,+ futhi ngeke ube khona; uyofunwa,+ kodwa ngeke uphinde utholakale kuze kube nini nanini,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”